စနေနေ့၊ ဇွန် ၁၃၊ ၂၀၁၅ တနင်္လာနေ့, ဒီဇင်ဘာလ 17, 2018 Douglas Karr
ငါကုမ္ပဏီများနှင့်ရုန်းကန်နေရသည့်အဆက်မပြတ်တိုက်ပွဲတစ်ခုမှာစဉ်းစားခြင်းကိုရပ်တန့်ရန်ဖြစ်သည် သူတို့ဘာတွေလုပ်ပေး နှင့်စဉ်းစားစတင်ပါ လူတွေဘာကြောင့်သူတို့ရဲ့ထုတ်ကုန်ဒါမှမဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုကိုသုံးတာလဲ။ ငါဥပမာတစ်ခုပေးပါလိမ့်မယ်။ နေ့စဉ်နေ့တိုင်း podcasts တွေကိုမှတ်တမ်းတင်၊ တည်းဖြတ်တာ၊ ပေါင်းစပ်ကုဒ်ရေးတာ၊ third-party ဖြေရှင်းချက်တွေကိုအကောင်အထည်ဖော်တာနဲ့ငါ့ဖောက်သည်တွေကိုလေ့ကျင့်တာကိုတွေ့လိမ့်မယ်။ Blah, Blah, Blah …ဒါကြောင့်လူတွေကငါ့ရဲ့ ၀ န်ဆောင်မှုတွေကိုစာချုပ်ချုပ်ဆိုတာမဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့ကအဲဒီဝန်ဆောင်မှုများကိုမဆိုရနိုင်မည်ဖြစ်သည် Fiverr တစ်ရာနှစ်ကောင်အလုပ်အကိုင်အဘို့။ ကျွန်ုပ်သည်သူတို့၏ဒစ်ဂျစ်တယ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးကြိုးပမ်းမှုများကိုပြောင်းလဲပြီးအကျိုးအမြတ်နည်းပါးသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများအတွက်သူတို့၏ရလဒ်များကိုသိသိသာသာတိုးမြှင့်နိုင်ခြင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်၏ဖောက်သည်များကကျွန်ုပ်ကိုငှားရမ်းသည်။
ငါမကြာခဏအသုံးပြုတဲ့နှိုင်းယှဉ်မယ်ဆိုရင်ရှိပါတယ်။ ကျွန်ုပ်တွင်လစဉ်လတိုင်းပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုအတွက်ယူဆောင်လာသည့်ကားတစ်စီးရှိသည်။ ကျွန်တော့်ကားကိုပုံသဏ္inာန်ကောင်းမွန်စွာထိန်းသိမ်းထားပြီးအလုပ်သို့ဆက်သွားရန်။ ငါအဲဒီစက်ပြင်မဟုတ်ဘူး အကယ်၍ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ကားကိုပြုပြင်မွမ်းမံရန်နှင့်လူမျိုးများအနိုင်ရရန်အဆင့်မြှင့်တင်လိုပါက၎င်းစက်ကိုယူဆောင်လာမည်လား။ ကျွန်ုပ်အေဂျင်စီသည်ရေနံလဲသည့်ဆိုင်မဟုတ်ပါ အနိုင်ရ ဆိုင်။
လက်ျာလွယ်, အသံ? မဟုတ်ဘူး။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ကုမ္ပဏီတွေကသူတို့ကဆီတွေပြောင်းဖို့ဝယ်တာပဲလို့ထင်ကြပေမယ့်တကယ်ကိုလိုအပ်တာကပြိုင်ပွဲကိုအနိုင်ရဖို့ပဲ။
Unique Value Propositions (UVP) ဟုလည်းလူသိများသည်၊ သင်၏တန်ဖိုးအဆိုပြုချက်သည်သင်ပေးသော ၀ န်ဆောင်မှုများ၏အကျိုးကျေးဇူးများနှင့်သင်၏ပြိုင်ဘက်များနှင့်သင်မည်သို့ခွဲခြားသည်ကိုဖော်ပြသည့်တိုတောင်းသောကြေညာချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
Pro သိကောင်းစရာ - ဘာကိုရှေ့ဆက်မလုပ်ခင် သင်ထင်ပါသလား သင်၏ထူးခြားသောတန်ဖိုးအဆိုပြုချက်သည်သင်၏လက်ရှိဖောက်သည်များသို့မဟုတ်ဖောက်သည်များအားမေးမြန်းပါ။ သင်က၎င်းကိုအမှန်တကယ်ယုံကြည်သည်မဟုတ်သည့်အတွက်သင်အံ့သြသွားနိုင်သည်။
သင့်ရဲ့ တန်ဖိုးအားအဆိုပြု အရာလေးခုကိုပြီးမြောက်ရန်လိုသည်
ဖြစ်ရမယ် or's ည့်သည်ရဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုကိုဖမ်းယူ။ သင်၏ကုမ္ပဏီသည်သင်၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုမှမျှော်လင့်ထားသည့်ရလဒ်များကိုမရရှိပါ။ ထို့ကြောင့်လူတို့သည်ကျွန်ုပ်ကိုငှားရမ်းကြသည်။
ဖြစ်ရမယ် နားလည်ဖို့လွယ်တယ်။ ဆယ်စုနှစ်များစွာကျွမ်းကျင်မှုပေးနေချိန်မှာငါနဲ့စီးပွားရေးဆက်ဆံမှုကအချိန်ပြည့် ၀ န်ထမ်းတစ် ဦး ရဲ့ကုန်ကျစရိတ်ထက်နည်းတယ်ဆိုတာငါသိတယ်။
ဖြစ်ရမယ် မင်းကိုခွဲခြားပါ သင့်ရဲ့ပြိုင်ဘက်အွန်လိုင်းမှ။ သင်၏တန်ဖိုးမြှင့်အဆိုပြုချက်များသည်သင်၏ပြိုင်ဘက်များနှင့်ဆင်တူပါက၎င်းတို့ကိုမအာရုံထားသည့်အရာတစ်ခုကိုသာအာရုံစိုက်ပါ။ ကျွန်ုပ်ဥပမာတွင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ရုပ်သံလိုင်းတစ်ခုတည်းကိုသာအာရုံစိုက်သောအေဂျင်စီတစ်ခုမဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်၏ကျွမ်းကျင်မှုသည်နည်းပညာနှင့်မဟာဗျူဟာမြောက်များစွာကိုကျယ်ပြန့်စွာဖြင့်စီးပွားရေးခေါင်းဆောင်များအားသူတို့၏စီးပွားရေးတိုးတက်အောင်မည်သို့လုပ်ဆောင်ရမည်နှင့် ပတ်သက်၍ ၎င်းတို့၏အရင်းအမြစ်များကိုဆက်သွယ်ပြောဆိုစဉ်အကြံဥာဏ်ပေးနိုင်ရန်ကျွန်ုပ်တို့၏ကျွမ်းကျင်မှုများသည်။
ဒါဟာအမှန်တကယ်မှလုံလောက်သောဖြားယောင်းရမည်ဖြစ်သည် the ည့်သည်ရဲ့ဝယ်ယူမှုဆုံးဖြတ်ချက်ယိမ်း။ ဥပမာ - ငါတို့ကမ်းလှမ်းသည် ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏တန်ဖိုးကိုယုံကြည်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များ၏အောင်မြင်မှုကိုသေချာစေလိုသောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏စပွန်ဆာများထံသို့ရက် ၃၀ ကြာပါသည်။
အီလက်ထရွန်နစ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွင်များစွာသောထူးခြားသောတန်ဖိုးသတ်မှတ်ချက်များအမြောက်အများရှိသည် ကုန်ပစ္စည်းပို့ဆောင်ခြင်း၊ ကုန်ပစ္စည်းသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကုန်ကျစရိတ်၊ ပြန်လာသည့်မူဝါဒများ၊ စျေးနှုန်းချိုသာမှု၊ ငွေပေးငွေယူလုံခြုံရေး၊။ ၎င်းတို့အားလုံးသည်ယုံကြည်မှုတိုးပွားစေရန်နှင့် the ည့်သည်အားရောင်းဝယ်မှုသို့ပို့ဆောင်ရန်အသုံးပြုသည်။ ၎င်းတို့သည်ဆိုက်မှထွက်ခွာခြင်းနှင့်အခြားနေရာများတွင်စျေးဝယ်ခြင်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခြင်းမရှိခြင်းဖြစ်သည်။ သင်၏ထုတ်ကုန်သို့မဟုတ် ၀ န်ဆောင်မှုအတွက်သင်တီထွင်ဖန်တီးမှုလိုအပ်သည်။ ၎င်းသည်သင်၏အရင်းအမြစ်များလော။ တည်နေရာလား။ အတွေ့အကြုံလား ဖောက်သည်များလား။ အရည်အသွေး? အကုန်အကျ?
အကောင်းဆုံးဥပမာတစ်ခုမှာ Lifeline Data Centres၊ အနောက်ဘက်အလယ်ပိုင်း colocation ငါတို့စက်ရုံနှင့် client ကို။ သူတို့ကအနောက်ဘက်အလယ်ပိုင်းရှိအခြားပြိုင်ဘက်များထက်ချုံ့ချဲ့ရန်နေရာပိုရှိသည်။ သူတို့ကဖက်ဒရယ်ထိပ်တန်းလျှို့ဝှက်ဒေတာအတွက်အသိအမှတ်ပြုထားပါတယ်။ ပြီးတော့…သူတို့ကသူတို့နေရာမှာရုံးခန်းတွေဆောက်နေတယ်။ ပေါင်းစပ်မှုကအရမ်းထူးခြားတဲ့အတွက်သူတို့နဲ့အတူကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်နေတယ် site နှင့်အမှတ်တံဆိပ်ပြန်လည်ဒီဇိုင်း ကြောင်းအပြည့်အဝကွဲပြားခြားနားမှုလွှမ်းခြုံပါလိမ့်မယ်!
သင်၏ UVP သည်အမှတ်တံဆိပ်တစ်ခုလုံးဆီသို့ ဦး တည်သွားမည်မဟုတ်ပါ။ သို့သော်သင်၏ ၀ က်ဘ်၊ လူမှုရေးနှင့်ရှာဖွေရေးနေရာမှသင်၏တန်ဖိုးသတ်မှတ်ချက်သည်သိသာထင်ရှားသင့်သည်။ ဤတွင် QuickSprout မှကြီးစွာသောသတင်းအချက်အလက်, အလွန်ကြီးစွာသောတန်ဖိုးအဆိုပြုချက်ရေးနည်း.
Droplr သည် File Sharing Tool ကိုအကောင်းဆုံးလား။
မတ်လ 20, 2015 မှာ 5: 06 pm တွင်
ဒါက အရေးကြီးတဲ့ အကြောင်းအရာတစ်ခုပါ။ လူတော်တော်များများက UVP ကို ​​နားလည်တယ်လို့ ထင်ပေမယ့် mission statement နဲ့ ရောထွေးနေတယ်။ အလုပ်ကောင်းတယ် ဒေါက်။
မတ်လ 20, 2015 မှာ 9: 06 pm တွင်